‘Displays of the Year’ ဆုကိုရသွားတဲ့ iPad Pro နဲ့ iPhone X | Myanmar Mobile App
Home Trending Gadget ‘Displays of the Year’ ဆုကိုရသွားတဲ့ iPad Pro နဲ့ iPhone X
‘Displays of the Year’ ဆုကိုရသွားတဲ့ iPad Pro နဲ့ iPhone X
iPad Pro နဲ့ iPhone X တို့ဟာ Displays of the Year ဆုကို The Society for Information Display (SID) မှ ပေးအပ်ခြင်း ခံရပါတယ်။ နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ Display Industry Awards ပွဲမှာ ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုတွေဟာ “အရည်အသွေးမြင့်ပြီးတော့ display လုပ်ငန်းထဲမှာ ဆန်းသစ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ပြသနိုင်တဲ့သူ”ကို ပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ 2018 award winner အားလုံးရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေဟာ ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ ၀ယ်ယူနိုင်ပြီးသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Apple ရဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဂျွန်လမှာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ 10.5 နဲ့ 12.9-inch iPad Pro model တွေဟာ ProMotion display နည်းပညာအတွက် ဆုတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။ ProMotion ဟာ 120Hz display refresh rate ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးတော့ screen ပေါ်ကလှုပ်ရှားနေတဲ့အရုပ်တွေကို ချောမွေ့၊ responsive ပိုဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စာသား၊ scrolling ၊ gaming ၊ Apple Pencil နှောင့်နှေးမှု၊ ဇာတ်ကား စတာတွေကိုလည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေပါတယ်။
10.5 and 12.9-inch iPad Pro model တွေမှာ 2224 x 1168 and 2732 x 2048 resolution ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ pixel density ကတော့ 264 pixels per inch ကို သုံးထားတာပါ။ True Tone လို့ခေါ်တဲ့ အခန်းတွင်းအလင်းအမှောင်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ display ချိန်နိုင်တဲ့ feature လေးကိုလည်း တွေ့မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ P3 wide color gamut နဲ့ လက်တွေ့ဆန်တဲ့အရောင်တွေကိုခံစားနိုင်မှာပါ။
iPhone X မှာတော့ Displays of the Year award ရခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ edge-to-edge Super Retina display ကြောင့် ရခဲ့တာပါ။ လုံးဝ physical button မပါဝင်တော့ပါဘူး။ iPhone အတွက် ပထမဆုံးသော OLED display ကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီးတော့ HDR နဲ့ True Tone ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
5.8-in. Super Retina display မှာ 458 ppi resolution ထည့်သွင်းထားပြီး OLED panel ရဲ့စံနှုန်းကိုလည်း အရင်မျိုးဆက်တွေနဲ့ တန်းညှိထားပါတယ်။ အရောင်၊ million-to-one contrast ratio ၊ system-wide color management တွေလည်း မကျန်ခဲ့ပါဘူး။ HDR display မှာ Dolby Vision နဲ့ HDR10 ကို ထောက်ပံ့ပေးထားပြီးတော့ ဓါတ်ပုံနဲ့ဗွီဒီယိုတွေအတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားအောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ True Tone ကတော့ white balance ကို ချိန်ညှိပေးပြီးတော့ စာရွက်ကြည့်နေရသလို ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
Apple မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်း ဆုတွေရခဲ့ပါသေးတယ်။ Sharp 70-inch 8K LCD TV နဲ့ Continental Automotive’s 3D Touch surface ၊ Kolon ရဲ့ Colorless Polyimide ၊ Synaptics ရဲ့ Optical In-Display Fingerprint Sensor ၊ LG UHD Crystal Sound OLED တွေကလည်း ဆုတွေအသီးသီး ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Displays of the Year award winner တွေအားလုံးအတွက် မေ၂၃ရက်နေ့ Display Week awards မှာ နေ့လည်စာစားပွဲလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
iPad Pro နဲ့ iPhone X တို့ဟာ Displays of the Year ဆုကို The Society for Information Display (SID) မှ ပေးအပျခွငျး ခံရပါတယျ။ နှဈစဉျကငျြးပတဲ့ Display Industry Awards ပှဲမှာ ရရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဆုတှဟော “အရညျအသှေးမွငျ့ပွီးတော့ display လုပျငနျးထဲမှာ ဆနျးသဈတဲ့လုပျရပျတှကေို ပွသနိုငျတဲ့သူ”ကို ပေးအပျတာဖွဈပါတယျ။ 2018 award winner အားလုံးရဲ့ ထုတျကုနျတှဟော ၂၀၁၇ခုနှဈမှာ ဝယျယူနိုငျပွီးသားတှေ ဖွဈပါတယျ။
Apple ရဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈ ဂြှနျလမှာထုတျလုပျခဲ့တဲ့ 10.5 နဲ့ 12.9-inch iPad Pro model တှဟော ProMotion display နညျးပညာအတှကျ ဆုတဈခုရခဲ့ပါတယျ။ ProMotion ဟာ 120Hz display refresh rate ကို မိတျဆကျပေးခဲ့ပွီးတော့ screen ပျေါကလှုပျရှားနတေဲ့အရုပျတှကေို ခြောမှေ့၊ responsive ပိုဖွဈအောငျ လုပျဆောငျပေးနိုငျပါတယျ။ စာသား၊ scrolling ၊ gaming ၊ Apple Pencil နှောငျ့နှေးမှု၊ ဇာတျကား စတာတှကေိုလညျး တိုးတကျကောငျးမှနျလာစပေါတယျ။
10.5 and 12.9-inch iPad Pro model တှမှော 2224 x 1168 and 2732 x 2048 resolution ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ pixel density ကတော့ 264 pixels per inch ကို သုံးထားတာပါ။ True Tone လို့ချေါတဲ့ အခနျးတှငျးအလငျးအမှောငျအပျေါမူတညျပွီးတော့ display ခြိနျနိုငျတဲ့ feature လေးကိုလညျး တှမွေ့ငျရနိုငျပါတယျ။ P3 wide color gamut နဲ့ လကျတှဆေ့နျတဲ့အရောငျတှကေိုခံစားနိုငျမှာပါ။
iPhone X မှာတော့ Displays of the Year award ရခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ edge-to-edge Super Retina display ကွောငျ့ ရခဲ့တာပါ။ လုံးဝ physical button မပါဝငျတော့ပါဘူး။ iPhone အတှကျ ပထမဆုံးသော OLED display ကို ပေးအပျခဲ့ပွီးတော့ HDR နဲ့ True Tone ကိုလညျး ထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။
5.8-in. Super Retina display မှာ 458 ppi resolution ထညျ့သှငျးထားပွီး OLED panel ရဲ့စံနှုနျးကိုလညျး အရငျမြိုးဆကျတှနေဲ့ တနျးညှိထားပါတယျ။ အရောငျ၊ million-to-one contrast ratio ၊ system-wide color management တှလေညျး မကနျြခဲ့ပါဘူး။ HDR display မှာ Dolby Vision နဲ့ HDR10 ကို ထောကျပံ့ပေးထားပွီးတော့ ဓါတျပုံနဲ့ဗှီဒီယိုတှအေတှကျ အရညျအသှေးမွငျ့မားအောငျ ဆောငျရှကျပေးထားပါတယျ။ True Tone ကတော့ white balance ကို ခြိနျညှိပေးပွီးတော့ စာရှကျကွညျ့နရေသလို ခံစားမှုကို ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။
Apple မဟုတျတဲ့ပစ်စညျးတှကေလညျး ဆုတှရေခဲ့ပါသေးတယျ။ Sharp 70-inch 8K LCD TV နဲ့ Continental Automotive’s 3D Touch surface ၊ Kolon ရဲ့ Colorless Polyimide ၊ Synaptics ရဲ့ Optical In-Display Fingerprint Sensor ၊ LG UHD Crystal Sound OLED တှကေလညျး ဆုတှအေသီးသီး ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။
Displays of the Year award winner တှအေားလုံးအတှကျ မေ၂၃ရကျနေ့ Display Week awards မှာ နလေ့ညျစာစားပှဲလုပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleOnePlus CEO မျှဝေလိုက်တဲ့ OnePlus6နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများ
Next articleVivo X20 Play UD ရဲ့ မျက်နှာပြင်အောက်က လက်ဗွေစနစ်ကို စမ်းသပ်ကြည့်ခြင်း